Kodzero-dzevanhu, 03 Ndira 2019
China 3 Ndira 2019
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika nemitemo dzinoti kudzokera pabasa kwemutungamiri wenyika, VaEmerson Mnangagwa, vachigura zororo ravo, asi vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika, VaConstantino chiwenga, vachiramba vari pabasa kunokonzera kusanzwisisa muvanhu mashandiro ehurumende.
VaMangwana Vanoti VaMnangagwa Ngavapihwe Nguva Asi VaMwonzora Vachiti Vakundikana Kutungamira
Kunyangwe hazvo zvinhu munyika zvakaita manyama amire nerongo munyaya dzezvehupfumi nematongerwo enyika, mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nevamwe vakuru mubato ravo vanoti zvinhu mugore ra2019 zvinenge zvichaita zviri nani asi vachiti vanhu vasunge dzisimbe.
Chizvarwa CheZimbabwe Chiri kuSouth Africa Chobatsira Vanotambura KuZimbabwe
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara nekushanda muSouth Africa, VaRonnie Muripa, vakatanga sangano rinobatsira vanotambura rinonzi Give A Smile Foundation rinotsvaka nekuunganidza mbatya, shangu, zvekudya pamwe nezvimwe zvingabatsira vanotambura.
Vanhu Vakawanda Votsvaka Rubatsiro rweMari Kuhama Dziri Kunze kweNyika
Takatarisana nekuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya musi wa 8 Ndira, vabereki vazhinji vari kutadza kuwana mari yechikoro, mbatya dzevana vechikoro, mabhuku nezvimwe zvinodiwa sezvo mitengo yezvinhu zvese izvi yakwira zvakanyanya.
Mumiri weMutasa South Oita Musangano neVagari
Nhengo yeMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa inomirira Mutasa South mudare reparamende, VaRegai Tsunga, vanoti basa rekumirira vanhu venharaunda yavo riri kuvatemesa musoro sezvo zvinodiwa nevanhu ava zvakawanda.
Sangano Rinorwira Kuendeswa kweMikana Kune Vechidiki Rinoparurwa muHarare
Mutungamiri wesangano iri, uye vari nhengo yevechidiki vebato reZanu PF, VaGodfrey Tsenengamu, vanoti sangano iri vakariumba muna 2015, asi nekuda kwekusagadzikana kwakanga kwakaita zvinhu mubato reZanu PF, vakamanikidzwa kumborisendeka parutivi.
Dare Rinoti VaChiwenga Ngavadzosere Vana Kuna Muzvare Marry Mubaiwa
Komiti yeMDC Yotanga Kuongorora Mashandiro eKanzuru yeHarare
Hurumende Inotora Matanho Achamisa Kutengeswa kweUpfu paMusika Mutema
VaMzembi Vanoti Vakaisirwa Muchetura, Vachitiwo VaMnangagwa Ngavasiye Basa
Mhirizhonga Inotanga Zvakare muDiepsloot kuSouth Africa